ထရန့်နှင့် ကင်ဂျုံအန်ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးသတ်စီစဉ်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ပွန်ပီယ? - Yangon Media Group
ထရန့်နှင့် ကင်ဂျုံအန်ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးသတ်စီစဉ်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ပွန်ပီယ?
ပြုံယမ်း(မြောက်ကိုရီးယား)၊ မေ ၉ ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုသည် သမ္မတဒေါ် နယ်ထရန့်နှင့်မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တို့သမိုင်း ဝင်ထိပ်သီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင် ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအပြီး သတ်ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြောက် ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ သည်ဟု မေ ၉ ရက်သတင်းရင်း မြစ်များအရ သိရှိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးပွန်ပီယိုမြောက်ကိုရီးယားသို့ မဆိုက်ရောက်မီကလေးတွင် မေ ၈ ရက်က သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် သည် ပွန်ပီယို၏မစ်ရှင်အဖွဲ့အ ကြောင်းနှင့်အီရန်နှင့်နျူကလီး ယားစာချုပ်မှ နုတ်ထွက်ကြောင်း ဝါရှင်တန်တွင် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သေးသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးပွန်ပီယိုသည် မြောက်ကို ရီးယားမှ ဖမ်းဆီးထားသော အမေ ရိကန်နိုင်ငံသားသုံးဦးအားပြန် လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ပွန်ပီယိုသည် မြောက်ကိုရီး ယားနိုင်ငံသို့ စီအိုင်အေအကြီးအကဲဘဝက ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုဒုတိယအကြိမ် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြောက် ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ပထမဦးဆုံး ရောက်ရှိခဲ့သူ အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှာ ၂ဝဝဝ ခုနှစ် က ရောက်ရှိခဲ့သူမက်ဒလင်းအောလ် ဘရိုက်ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်ကအမေ ရိကန်သမ္မတဘီလ်ကလင်တန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျွန်အီနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးစား ခဲ့သော်လည်း ပထမမြောက်ခဲ့ပေ။
”မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေး နွေးပွဲကို တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံများအကူအညီနဲ့ အသေးစိတ်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဝါရှင် တန်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပွန်ပီယိုသည် အကြံပေးအရာရှိ အနည်းငယ်ဖြင့် Air Force 757 အစိုးရပိုင်လေယာဉ်ဖြင့် မေ ၇ ရက်မှောင်ရီပျိုးချိန်မှစတင်ကာ ဝါရှင်တန်ခရီးစတင်ထွက်ရှိခဲ့သည်။ AP နှင့်ဝါရှင်တန်ပို့စ်မှ သတင်းစာဆရာနှစ်ဦးတို့လည်း ပါရှိသွားခဲ့သည်။ ပွန်ပီယို၏မြောက် ကိုရီးယားခရီးစဉ်အား အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ ချေ။
ဝန်ထမ်းများကို ရိုက်နှက်မှု စွပ်စွဲချက်ကြောင့် ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း အကြီးအကဲ၏ဇနီး ပြ??
အချက် ၁၁ ချက်ပါ အလုပ်သမားအခွင့် အရေး United Tex Oversea အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်သား ၇ဝဝ ခန့် လုပ် ငန်းခွင်ရပ??
သင်္ကြန်ကာလပြီးနောက် ပုလောမြို့ရှိ ဖိုးရှမ်းကမ်းခြေသို့ အပန်းဖြေ လာရောက်သူများဖြင့် စည်ကား
”ကျွန်မတို့က Reuse မလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှ Reduce လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပလတ်စတစ် အသ